Down the Memory Lane ( South Africa - Part 2)
စိတ် အစဉ် အတွင်းမှ အာဖရိက
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ထမ်းအဖြစ် တတိယ အတွင်းဝန် ဘ၀နှင့် ပြည်ပသို့တာဝန်ဖြင့် ထွက်စဉ်က သားသမီးများ ငယ်သေး၍ မိသားစု အစုံ အလင်မိသားစု တစ်စုလုံး သွားနိုင်ခဲ့ ကြပေသည်။ နောက် ၄င်းတို့ အနည်းငယ် ကြီး လာကြတော့ သားကြီး သမီးကြီး တွေက ကျောင်းကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စ တွေနှင့် မို့ မလိုက် နိုင်ကြတော့ဘဲ အငယ်တွေသာ လိုက်နိုင် ကြတော့ သည်။ နောက်ဆုံး တောင်အာဖရိက သို့ တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် သွားရာတွင်မူ ခလေးတွေ က အလုပ်တွေ အကိုင်တွေ အိမ်ထောင်ကွဲတွေ ဖြစ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
ဆေးကျောင်းမှာ Final Part I တက်နေသည့် အငယ်ဆုံး သမီး ကတော့ ကျောင်းပိတ် ရက်နှင့်ကြုံ ၍ နှစ်လ ခန့် ခဏ လိုက်လာနိုင်သည်။ ကျောင်းဖွင့် ချိန် နီးတော့ မြန်မာပြည် ပြန်သွားရသည်။ သမီးပြန်တော့ အမေကလည်း သမီးကိုစောင့် ရှေက်ရန် လိုက်ပြန် သွားရသည်။ သို့နှင့် တောင်အာဖရိက Assignment တစ် လျှေက် လုံး ဖုန်းမောင် တစ်ကိုယ် ထည်း စခန်း သွားခဲ့ရသည်။
လုံခြုံရေးအခြအနေကလည်း မကောင်း။ အညောင်းပြေ အညာပြေ အပြင်ထွက်ကာ လမ်း လျှောက် ခြင်တိုင်းလည်း လျှောက်လို့က လုံခြုံရေး စိတ်မချရ။ သည် အခြေအနေမျိုး တွင် တစ်ယောက်ထည်းသမား၏ အခြေအနေ နှင့် အထည်းကျန် အခက်အခဲကို သံရုံး၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ သံအမတ်ကြီး ဦးအုန်းသွင် က နားလည် စာနာ သည်။
“ ကျွန်တော် လည်း ဂေါက် သီး သမားမို့ ကိုယ်ချင်း စာပါတယ်ဗျာ။ ဂေါက်သီးသမား ဆိုတာ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ဂေါက်သီး မကစားနိုင်တောင် Driving Range လောက်တော့ သွား ခြင်ကြတာပါဘဲ ။ ဒီနေရာရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်အတွက် က ဂေါက် ကွင်းက အလုံခြုံ ဆုံးပါဘဲ ဗျာ။ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ တွေ ရှိ ပါတယ်။ ကျွန်တော် စီစဉ် ပေးပါမယ်။ “
သံအမတ်ကြီး ကိုယ်တိုင် ကလည်းေ၈ါက်သီး အားကစား သမားဖြစ် သောကြောင့် ဂေါက် သမားခြင်းခြင်း စာနာကာ ဂေါက်သီး ရိုက် နိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးသည်။ သို့ နှင့် အသင်းဝင်ကြေး မည်ကာ မတ်တတ် သာပေးရသည့် Monument Golf Club သို့ သံတမန် လျှော့ ဈေး ၊ မိတ်သင်္ဂဟ လျှော့ ဈေး စသည့် လျှော့ဈေးပေါင်း များစွာ ဖြင့် အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Monument Golf Club မှာ ပရီတိုးရီးယား မြို့ အပြင် ဘက် ဂျိုဟန် နစ္စဘတ် သို့ သွားသည် R-21 လမ်းမကြီး ဘေးတွင် ဖြစ်သည်။ အာဖရိ က ဂေါက်ကွင်း တို့ ၏ ထုံးစံ အတိုင်း လွင်တည်း ခေါင် ဖြစ်သည်။ အာရှ နိုင်ငံများ ရှိ Country Club ပုံစံမျိုး စိမ်းစိမ်း စိုစို မဟုတ်။
ကျွန်တော် အသင်းဝင်ကာစ ဂေါက်ကလပ် အမည် မှာ Monument Golf Club ဖြစ်သည်။ ဂေါက်ကွင်း နှင့်မဝေး လှသော တောင် တန်းပေါ် ရှိ တောင် အာဖရိ တည်ထောင်ကာစ အထိမ်း အမှတ် ကျောက် တိုင်ကြီး ( Monument ) ကို အစွဲ ပြုကာ Monument Golf Club အမည် တွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဂေါက်ကွင်းသာ မက ဤနေရာ အနီး တ၀ိုက် နေရာ အတော် များများ မှာ Monument ဆိုသည့် အမည် တစ်ခု မဟုတ် တစ် ခု ပါသည် ချဉ်းသာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အသင်း ၀င်ဖြစ်ပြီး မကြာခင်တွင် Waterfloof Golf Club အမည် သို့ ပြောင်း သွားသည်။
Waterkloof Golf course and Club House.
Golf Club သို့ အ၀င်။
Waterfloof Golf Club Restaurent.
Waterkloof Golf Course.
ဂေါက်ကွင်းရေကန် အတွင်း ရှိ Egyption Gees များ။
ဂေါက်ကလပ် အမည်က Monument လို့ ဖြစ်လာရ ခြင်းမှာ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ သကဲ့သို့ Monument ဂေါက်ကွင်းကြောဘက် တောင်ကြောလေး အပေါ်တွင်တည် ဆောက် ထားတဲ့ ဧရာမ ကျောက်တိုင်ကြီး ကို အစွဲ ပြု ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Monument အမည်လေး ပါလာတဲ့အတွက် သူ့ အကြောင်းလေးကို တော့ ရေးခြင် ပါတယ်။ အကြောင်းတော့ တောင်အာဖရိက ပေါ်ထွန်း လာဘို့ အတွက် နယ်သစ် ပါယ်သစ် ရှာ ဘို့ ရောက်လာ ခဲ့ကြတဲ့ လူဖြူတွေ က သူတို့ မည်မျှ ဒုက္ခ သူက္ခ ခံ ကာ ဒီနယ်မြေ ကို ထူထောင် ခဲ့ ကြရတယ် ဆိုတာ ကို မှတ်တမ်း များ ပြသ ထားရာ နေရာ မို့ ပါဘဲ။
တောင်အာဖရိကသမိုင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြောလျှင် ယခင်က လူမည်းများအား အသား အရောင် ခွဲခြားရေး စနစ်ဖြင့် ကြီးစိုးခဲ့သော လူဖြူများ ကို ANC ဦးဆောင် ကာ တော်လှန် ခဲ့သည့် အသားအရောင် ခွဲခြားမှု တော်လှန်ရေး ကိုသာ အသိများ ကြသည်။
သို့ရာတွင် အရင့်အရင် နှစ်ပေါင်းများစွာက ဤလွင်တီးခေါင်ဒေသသို့ လူဖြူများ ရောက်ရှိ လာကာ ဒုက္ခသုက္ခ မြောက်များစွာဖြင့် အခြေချခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ်၊ ဒေသခံ မျိုးနွယ် စုဖြစ်သည့် ဇူးလူးများ၏ ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အသက်ပေါင်း ထောင် သောင်း ချီကာ သေဆုံးရပြီးမှ လူနေ ဒေသတစ်ခု၊ ထိုမှတစ် ဆင့် ယခုကဲ့သို့ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံကဲ့သို့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် သမိုင်း စဉ်ကိုမူ သိသူ နည်းကြပေသည်။
Monument ကို အဝေးက ကြည့်ပါက ကျောက်တိုင် ကြီး သဘွယ် ထင်ရသော် လည်း အတွင်း၌မူ ပြတိုက် အဖြစ် ဖွဲ့ စည်း တည် ဆောက် ထားသည်။ အထက်သို့ ဓါတ်လှေကား ဖြင့် တက်ကြရသည်။
နောက်ခံ တောင်တန်း မှာ Monument အထိမ်း အမှတ် ကျောက် တိုင်ကြီး တည်ရှိရာ တောင်တန်း ဖြစ်သည်။
Monument ကို အဝေးမှ တွေ့ ရပုံ။
Monument ရှေ့ အ၀င်။
Monument အဆောက်အအုံသည် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်ကြီးတစ်ခု အပြင် ဆိုခဲ့သည်အတိုင်း တောင်အာဖရိက ပေါ်ထွန်းခဲ့သော သမိုင်းစဉ်၏ မှတ်တမ်းများ သိုလ်မှီး ရာ အဆောက်အအုံကြီးလည်း ဖြစ်သည်။
၁၅ဝဝ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် ပေါ်တူ၈ီသင်္ဘောသားများသည် အိန္ဒိယသို့ သွားရာမှ အာဖရိကတောင်ဘက် အငူသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၆ ရာစုတွင်မူ ဥရောပ တိုက်သားများပါ ပါလာသည်။ ၁၆၅၂ ခုနှစ်တွင် Table Bay ( Cape Town ) ၌ ဒတ်ခ်ျများသည် East India Company (VOC) ကို တည်ထောင်ကာ ဖြတ်သန်း သွားလာသည့် သင်္ဘောများအား ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြသည်။
အာဖရိက တောင်ဘက်အစွန်းသမုဒ္ဒရာ ကမ်းခြေသို့ ရောက်ရှိသူများသည် ၁၈၃၅ ခုနှစ်တွင် မြောက်ဘက်သို့ Great Trek မဟာ ခရီးကြမ်း လျှောက်လှမ်း၍ နယ်ပယ် ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြ သည်။ ယခုတောင်အာဖရိက ခေါ်သည့် အရပ်၌ ၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် Boer Republic Transvaal နှင့် ၁၈၅၄ ခုနှစ်တွင် Orange Free State တို့ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ ယခု တောင်အာဖရိက ဟု ခေါ်တွင် သည့်ဒေသတွင် ကနဦးလူနေမှုစံနစ်သစ် စတင်အခြေစိုက်သည့် သမိုင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤ Monument အဆောက်အအုံ ကိုမူ ၁၈၃၈ ခုနှစ်ထည်းက စ၍တည်ဆောက်ရာ ၁၈၄၉ ခုနှစ်တွင် ပြီးသည်။ ဤ အဆောက်အအုံသည် ၁၈၃၅ မှ ၁၈၅၄ အထိ တောင်အာဖရိက ဖြစ်ပေါ်မှု သမိုင်း၏ ပြခန်းပင်ဖြစ်သည်။
အဆောက်အအုံမှာ တောင်ကုန်းထက်တွင် တည်ဆောက်ထားကာ ကြီးကျယ် ခန်းနား မြင့်မားလှသည်။ အဝေးမှကြည့်လျှင် ကျောက်တိုင်ကြီးသဖွယ် ထင်ရသည်။
Monument အနီး မြင်ကွင်း
Monument ကဗျဉ်းစာ တမ်း။
Monument အပေါ် မှမြင်ကွင်း။
Monument အတွင်း မြင်ကွင်း။
တောင်ဘက် သမုဒ္ဒယာ ကမ်းခြေမှ မြောက်ဘက် သို့ ခရီးရှည် ခရီးကြမ်း နှင် ခဲ့သည့် Great Trek.
လူဖြူများ နှိပ်စက် သတ်ဖြတ် မှု ခံကြရသည့် ပြ ကွက်။
တောင်အာဖရိကကို လူဖြူများထူထောင်ကြပြီးနောက် ဒေသခံ လူမည်း များအား အသား ရောင်ခွဲ ခြားရေး စနစ် ဖြင့် ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ် ခဲ့ ကြသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်မူ လူမည်း များသည် အသားရောင် ခွဲခြားရေး စံနစ် ကို တွန်းလှန် ဖယ်ရှားကာ နိုင်ငံတော် အာဏာ ရရှိခဲ့သည်။
ဤ Monument သည် လူဖြူ များက ၄င်း တို့ အနေနှင့် ဒေသခံ လူမည်း များ နှင့် မည်မျှ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြရပြီး မှ ဤ ကဲ့ သို့ နိုင်ငံ ထူထောင်ခဲ့ရ ပုံ ကို ပြသထား သည့် ပြတိုက်သာ ဖြစ်သည်။ လူမည်း ဆန့်ကျင်ရေး မဟုတ်စေကာမူ လူဖြူ ဘက်လိုက်ကာ ပြသထားသည့် နေရာ ဖြစ်သည်။
သို့ သော် ၁၉၉၄ တွင် လူ မည်း သမ္မတ ဖြစ်လာသည့် နယ်လ်ဆင် မန်ဒဲလား မှ အစ အမ်ဘက်ကီ အလယ် ယခု လက်ရှိသမ္မတ ဂျက်ကော့ ဇူးမား အဆုံး အားလုံးသော လူမည်း အစိုးရ အဆက် ဆက် သည် လူ ဖြူ များ တည် ဆောက် ထားခဲ့ သည့်ဤ အဆောက် အအုံကို ဖျက်ဆီးခြင်း မရှိဘဲ သမိုင်း မှတ်တိုင် အဖြစ် ဆက်လက် ထားရှိ သည်။ ကျွန်တော့် အမြင် အရ သဘောထားကြီးသည် ဟု ဆိုခြင်ပါသည်။ ဤ ကဲ့သို့ အဆောက် အအုံ တစ်ခုကို ဖျက်လိုက် ရုံ မျှ နှင့် အမုန်း တရား နှင့် အာဃာဓ ကို ဖြေ ဖြောက် နိုင်ကောင်း ဖြေဖြောက် နိုင်မည်။ သို့ ရာတွင် သမိုင်း ဆိုသည်က တော့ ပြောက်ကွယ် သွားမည် မဟုတ် သည်ကို သိကြ ပေမည်။
ဂေါက်ကွင်းနဲ့ အိမ်က မဝေးလှပါ။ ကားနဲ့ တောင်တက် တောင်ဆင်း အကွေ့ အကောက် ငါးမိနစ် လောက် မောင်းရင် ရောက်တဲ့ နေရာ ပါ။ တစ်ခုသော စနေ နေ့ နံနက် မှာ ဂေါက်ကွင်းသွားပါတယ်။ ကစား မယ်ပေါ့။ အဖေါ် တော့ မရှိ။ သို့သော် ကိစ္စမရှိ ကွင်းကျ မှ ကြည့် လုပ်မည် ဆိုကာ ထွက်ခဲ့ ပါတယ်။
ကွင်းရောက်တော့ Pro Shop Registration ကောင်တာ မှာ အသား လတ်လတ် အရပ် ခတ်ပြတ်ပြတ် ပိန်ပိန် ပါးပါး ဂျပန် တစ်ဦး ရပ်နေတာ တွေ့ ရပါသည်။ ကျွန်တော်က စပြီး-
“ ကျွန်တော် စိုးလှိုင်ပါ ။ မြန်မာသံရုံး က Minister Counsellor (သံမှူးကြီး ) ပါ၊ ခင်ဗျားတို့အတွဲမှာ လူလိုရင် ၀င် ကစားပါရစေ ”
ထိုပုဂ္ဂိုလ် က ကျွန်တော်ကို မတူသလိုမ တန် သလို ပုံ စံ မျိုး နှင့်ကြည့်နေရာက-
“ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် Minister (သံမှူးကြီး) ကိုစောင့် နေ တာဗျ ။ သူ လာမှ လူ လို ရင် ၀င် ကစားပေါ့၊ အခု တော့ ခင်ဗျား ကို ကျွန်တော် မပြော နိုင်သေးဘူး။ “
နိုင်ငံ အသီးသီး၏ သံရုံး များ သည် နိုင်ငံ တကာ သံရုံး ဖွဲ့ စည်း ပုံ အရ ဖွဲ့ စည်း ထား ကြသည့် အတွက် ရာထူးအဆင့်လိုက်အခေါ် အဝေါ်များမှာ အားလုံးအတူတူပင် ဖြစ်ပါ သည်။ သို့ ရာတွင် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ သံရုံးများ၏ ဖွဲ့ စည်း ပုံ မှာ မူအနည်း ငယ် ကွာခြားမှု ရှိကြပါသည်။
ယေဘူယျ အားဖြင့် သံရုံးများကို Embassy ဟုခေါ်ကြစေကာမူ British Commonwealth ( ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ ) အဖွဲ့ ၀င် နိုင်ငံ အခြင်းခြင်း၏ နိုင်ငံများ အတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင် သံရုံး များကိုမူ High Commission ( မဟာမင်းကြီးရုံး ) ဟု ခေါ်ကာ သံအမတ်ကြီးကို High Commissioner ( မဟာမင်းကြီး) ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ မဟုတ်သော မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံးကို British Embassy ဟုခေါ်သော် လည်း ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် စင်ကာပူတွင်မူ Brirish High Commission ဟု ခေါ်သည်။ ထို့ ကြောင့် စင်ကာပူ ရှိ ဗြိတိသျှ သံအမတ် ကြီးကို British High Commissioner ( ဗြိတိသျှ မဟာမင်းကြီး) ဟု ခေါ်သည်။
သံရုံး ဒုတိယအကြီး အကဲများ၏ အခေါ်အဝေါ်မှာမူ များစွာကွဲပြားမှု မရှိလှပါ။ မြန်နိုင်ငံ သံရုံးကြီးများ၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ ရာထူးမှာ Minister Counsellor (သံမှူး ကြီး ) ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း ၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှင်္ စသည့် သံ ရုံးကြီး များ၏ ဒုတိယ အကြီး အကဲ မှာ Minister ( သံမှူးကြီး ) ဖြစ်ပါသည်။ Minister ရော Minister Counsellor ကိုပါ မြန်မာ ဘာသာ ဖြင့် တရားဝင် ခေါ်ဆိုရာတွင် သံမှူးကြီးဟု ပင် ခေါ်ဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်၏ အမှုထမ်း ကာလအတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်း ပုံတွင် Minister ရာထူး မရှိပါ။ မြန်မာသံရုံး အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ၏သံရုံး ငယ်များတွင် Third Secretary (တတိယ အတွင်းဝန် ) သည်လည်း သံရုံး ဒုတိယ အကြီးအကဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ဂျပန်က သူ၏ သံရုံး ဒုတိယ အကြီးအကဲ ကို စောင့်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမှီ တကယ့်ပီဘိ ဂျပန်ပုံစံ နှုတ်ခန်းမွေးနှင့် ဂျပန် သံမှူး ကြီးရောက်လာပါသည်။ ပထမ ဂျပန်၏ အပြော ကိုမ စောင့် တော့ဘဲ ကျွန်တော် ကပင် ကျွန်တော် ဘယ်သူဘယ် ၀ါ ဖြစ်ကြောင်း ဂေါက်သိး ကစား လိုပါကြောင်း ပြောပါသည်။ သူကတော့ သဘော ကောင်းသည် -
“ ကျွန်တော် တို့ က သုံး ယောက်ထဲ ဘဲရှိပါတယ်။ ၀င်ကစားပါဗျာ “
သို့ နှင့် One Flite, Four-Ball ကစား ဖြစ်သွားသည်။
ပထမဦး ဆုံးတွေ့သည့် ဂျပန် မှာ ဂျပန်သံရုံးမှ Counsellor (သံမှူး) ကင်နီချီ ဖြစ်ပြီး ဂျပန် သံရုံး ဒုတိယ အကြီး အကဲ ( Minister ) မှာ တကာရှီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန် ဂျပန်တစ်ဦးမှာ ဂျပန်အစိုးရက တောင်အာဖရိက သိပ္မံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီး ဌာန သို့ အကြံ ပေး အဖြစ် စေလွှတ်ထားသည့် အာကီနို ဖြစ်ပါသည်။
Our Regular Flite, from Left to right Kenichi Mizawa, Soe Hlaing, Aquino, Takashi Kamiyama.
ဂေါက်သီး ၉ ကျင်း စားအပြီး Club House တွင် စား ကြသောက်ကြ နောက်ကြ ပြောင်ကြ နှင့် ခင်မင်သွားကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပထမ တွေ့စက မတူသလို မတန် သလို ပုံစံ မျိုး နှင့် ဆက်ဆံ သူဟု ထင်ခဲ့ မိသည့် ကင်နီချီ နှင့်မူ ညီရင်း အစ်ကို သဘွယ် ခင်မင်သွားခဲ့ ကြပါသည်။
သူကလည်း မိသားစု ခေါ်လာသူ မဟုတ်။ အသက် ခြင်းလည်း အတူတူ ၀ါသနာ ခြင်းကလည်းတူ ကြသည့်အတွက် ကစားအတူတူ၊ စားလည်း အတော်များများသော အချိန်တွေမှာ အတူတူ ၊ သောက်လည်း အတူတူ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
ကျွန်တော် အိမ် နှင့် သူ့မှာ အိမ်ခြင်း မဝေး လှ။ သူ့ အိမ် အနီး Brooklyn Mall ရှိ ဂျပန် စားသောက်ဆိုင်မှာ သူ့အိမ်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ တစ်ယာက် ထည်းသမား ဖြစ်၍ ရုံးပတ်ရက်များ တွင်သာ ရံဖန် ရံ ခါ သာ ချက်ပြုတ် စားသောက်ခါ များသော အားဖြင့် ထို ဂျပန် ဆိုင်တွင် သာ စားသည်။ မကြာ ခန ဆိုသကဲ့ သို့ သူခေါ် သဖြင့် ရောက်ခဲ့ရသည်။ သူ ၏ Vodka ပုလင်းကိုလည်း ဆိုင်မှာပင်ထားသည်။
ဂျပန် စားသောက် ဆိုင် ဆိုသော် လည်း ဆိုင်ရှင်က တိုင်ဝမ် တရုတ် ချက်ပြုတ်သူ Chef က ထိုင်း၊ စားပွဲ ထိုးက လူမည်း မလေး တွေ ဖြစ်သည်။ ဂျပန် စားသောက် ဆိုင် ပုံ စံ အရ ချက်ပြုတ် သည့် နေရာ တွင်ပင် စားကြသည်။ သူတစ်ခွက် ကိုယ် တစ်ခွက် Chef လည်း တစ်ခွက် ၊ သို့ သော် သွက်သွက် တော့ မလယ် ကြပါ။
အမှန်တော့် Hole in One ကို အတုယူ ကာ Sky Golf-in-One ဟု အမည် ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည့် Golf Driving Range နှင့် စားသောက် ဆိုင်ကလေး ဖြစ်ပါသည်။ Waterkloofေ၈ါက်ကွင်းဘေး တွင်ပင် ရှိပါသည်။ စားသောက် ဆိုင် ကလေး က အမြင့်စီးမှာ ဖြစ်၍ေ၈ါက်ကွင်း ကို ရော အဝေးရှိ တောင်တန်း လေးကိုပါ မြင် ရဖြင့် စိတ်အေး လက်အေး နားနေ ရန် ကောင်း သည့် နေရာဖြစ်သည်။
Sky Golf-in –One ရှိ Merlot’s Restaurant အပြင်ဘက်။
Sky Golf-in –One ရှိ Merlot’s Restaurant အတွင်းဘက်။
ကျွန်တော် နှင့် ကင်နီချီ တို့ ဂေါက်သီး လေ့ ကျင့်လိုက် စားလိုက် သောက်လိုက် နေ ကြသည့် နေရာ လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် Assignment ပြီး၍ ပြန် ခါနီးတွင် အဆိုပါ Restaurant မှာ ပင်နှုတ်ဆက် ည စာ စားပွဲ ကျင်းပ ပေးသည်။
Sky Golf-in-One Driving Range ပိုင်ရှင် Kevin Chan။
Kevin Chan သည် တိုင်ဝမ် မှ လာရောက် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင် နေသူဖြစ်သည်။ တောင် အာဖရိက တွင် တရုတ်ပြည်ကြီးမှ တရားဝင်ရော မ၀င်ရော တရုတ် များစွာ ရှိသကဲ့သို့ တိုင်ဝမ် တရုတ်တွေ လည်း များလှသည်။ Kevin Chan သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် တစ်နေ့ တွင် လူဆိုး များသူ့ အိမ်သို့ ၀င် ရောက် လုယက် မှုဖြစ်ပွားသည်။ TV, Video, Computer စသည့် ပစ္စည်း များက အစ အဖိုးတန် ပစ္စည်း အတော်များများ ပါသွားသည်။ ကျွန်တော်က-
“ Kavin ခင်ဗျားအိမ် က ခြံစည်းကလည်း အမြင့်ကြီး Electrified Alarm Wire တွေလည်း တတ် ထားတာဘဲ။ Wire ကို ကျော် ဖြတ် လိုက်တာ နဲ့ ADT Security မှာ Alarm မြည်တာဘဲ။ ဘယ်လိ်ုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်း တွေ ပါသွားရတာလဲ ဗျာ။ “
“ စိုးစံ- ( ကင်နီချီ ကျွန်တော့ ကို ခေါ် သည့် အတိုင်း ခေါ်သည်။) လူဆိုးတွေက တွက်ပြီးသားဗျ။ ခြံကို ကျော် မယ် Electrified Wire ကိုဖြတ်မယ် ။ ဒါ ဆိုရင် Security ADT မှာ Alarm မြည် မယ်။ ဒါတွေ အားလုံးသိတယ်။ Alarm မြည် လို့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ ကျွန်တော့် အိမ်ကို လွှတ်ရင် အနည်းဆုံး (၇) မိနစ်လောက်ကြာမယ်။ သူတို့ က အားလုံး Timing ကိုက်ထားပြီးသား ဗျ။ ရုပ်ရှင်ထဲ မှာလို Alarm off လုပ်တာ တို့ ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက် လေ့လာ နေတာတို့ ဘာ တို့ ညာတို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ။ Alarm Wire ကို ဖြတ် ခြံဝင်းကိုကျော်ပြီးဝင် တယ်အိမ်မျာ တတ် ထားတဲ့ alarm ရော ADT မှာ ရှိတဲ့ Alarm ရော အားလုံ မြည်တာဘဲ။ အဲဒီလိုAlarm မြည်နေတဲ့ ထဲကနေ လု ယူသွားတာ (၅) မိနစ်တောင် မကြာလိုက် ဘူး ထင်တယ်။ ADT Security Team လည်း ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ တို့ မရှိတော့ ဘူးဗျ။ တော် သေးတာပေါ့ဗျာ လူကို ဘာ မှ လုပ်မသွားပေလို့ ။ ”
Posted by Soe Hlaing at 06:58
(26) ISO, Noise and Sensor ...
(27) Sunny 16 Rule ...
My Photo Gallery (3) Pictures of Thipaw, My Old ...
Down theMemory Lane ( South Africa - Part 1) စ...
My Photo Gallery (4) Pictures of Thipaw, My Old...
(28) Composition Part-5(Leading Lines ) ...
Down the Memory Lane ( South Africa - Part 2) ...
(29) BirdPhotography ...
(30) Noise ...
Down the Memory Lane ( South Africa - Part 3) ...